एक गिलास वाइनले घटाउँछ आधा घण्टा आयु | Nepali Outlook
एक गिलास वाइनले घटाउँछ आधा घण्टा आयु व्यवसायमुखी शिक्षानिती बनाउन पहल गर्ने: मुख्य मन्त्री भट्ट ओलीको भारत भ्रमण पछि, प्रवासीको अपेक्षा सीमासम्म होइन, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग नेपालको आवश्यकता : उपाध्यक्ष रावल यो हो एसियाकै ठूलो तोप
Published On: April 13, 2018 || 2074 चैत्र 30 शुक्रबार , at 6:20 PM
कतिपय मानिस हरेक साँझ एक गिलास रेड वाइन पिउँदा मुटु स्वस्थ हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन्। तर पछिल्लो अध्ययनले यो भनाइलाई गलत साबित गरिदिएको छ। दैनिक सिफारिस गरिएको मात्राभन्दा बढी वाइन वा बियर पिए त्यसले प्रतिगिलास आधा घण्टाको दरले आयु घटाउने निष्कर्ष नयाँ अध्ययनले निकालेको छ।
यो अध्ययन ल्यान्सेट मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित छ। अध्ययनअनुसार प्रतिसाता पाँच गिलास (प्रतिगिलास १७५ एमएल) वाइन अथवा २.३ लिटर बियरभन्दा बढी पिउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ। अध्ययनले प्रतिसाता १ सय ग्राम अर्थात् १२.५ युनिट अल्कोहलभन्दा बढी सेवन गरे त्यसले स्ट्रोक, हृदयघात र मृत्युको जोखिम बढाउने बताइएको छ।
एक ४० वर्षको व्यक्तिले दैनिक सिफारिस गरिएको मात्राभन्दा बढी अल्कोहल सेवन गर्नु धुम्रपानजत्तिकै हानिकारक हुने अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन्। ‘दैनिक २ युनिटभन्दा बढी अल्कोहल सेवन गरे मृत्युदर बढ्न थाल्छ,’ युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिजका प्राध्यापक डेविड स्पिगेलहेल्टर भन्छन्।
४० वर्षको व्यक्तिले दैनिक मात्राभन्दा बढी ४ युनिट अर्थात् प्रतिदिन ३ गिलास वाइन पिए उसको आयु दुई वर्ष कम हुने सो अध्ययनले जनाएको छ। यो समय भनेको सो व्यक्तिको बाँकी जीवनको २० भागको एक भाग हुन आउँछ। जुन दिनको एक घण्टा हुन आउँछ। यसको अर्थ तोकिएको मात्राभन्दा बढी प्रत्येक युनिट अल्कोहलको सेवनले औसतमा १५ मिनेट आयु घटाउँछ।
यद्यपि वाइन सेवनबाट केही हदसम्म गैर घातक हृदयघात कम हुन्छ तर यसले अन्य प्राणघातक जोखिमलाई भने बढाउँछ।
१९ देशमा गरिएको ८३ अध्ययनको तथ्यांक विश्लेषणबाट यो निष्कर्ष निकालिएको हो। जसमा ६ लाख मदिरा सेवनकर्ता सहभागी भएका थिए।
सहभागीमध्ये आधाभन्दा बढीले प्रतिसाता १०० ग्रामभन्दा बढी अल्कोहल सेवन गरेको बताएका थिए भने ८.४ प्रतिशतले सातामा ३५० ग्रामभन्दा बढी अल्कोहल पिएको बताएका थिए। प्रतिसाता २०० देखि ३५० ग्राम अल्कोहल सेवन गर्नेहरुको जीवन एकदेखि दुई वर्षले कम रहेको पाइयो भने प्रतिसाता ३५० ग्रामभन्दा बढी सेवन गर्नेको आयु ४ देखि ५ वर्षले कम भएको देखिएको छ।
युनिभर्सिटी अफ सेफिल्डका प्राध्यापक टिम चिकोका अनुसार धुम्रपानकर्ताहरुको आयु औसतमा १० वर्षले कम हुन्छ। अत्याधिक अल्कोहल सेवन गर्नेहरुको आयुपनि धुम्रपान गर्नेहरुको जत्तिनै घट्ने उनको अनुमान छ। ‘यो अध्ययनले एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट पारेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अल्कोहल सेवनबाट स्वास्थ्यमा कुनै फाइदा पुग्दैन।’
स्पिगलहेल्टरका अनुसार यो अध्ययनले मार्गनिर्देशनअनुसार मात्र अल्कोहल सेवन गर्नेहरुको मृत्युदरमा खास फरक नरहेको र तिनमा २० प्रतिशत कम हृदयघात हुने गरेको छ। द गार्जियन
ओलीको भारत भ्रमण पछि, प्रवासीको अपेक्षा
1 एक गिलास वाइनले घटाउँछ आधा घण्टा आयु
2 व्यवसायमुखी शिक्षानिती बनाउन पहल गर्ने: मुख्य मन्त्री भट्ट
3 ओलीको भारत भ्रमण पछि, प्रवासीको अपेक्षा
4 सीमासम्म होइन, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग नेपालको आवश्यकता : उपाध्यक्ष रावल
5 यो हो एसियाकै ठूलो तोप
1 लालबाबु पण्डितलाई : कमलको खुल्ला पत्र !
2 लीला अधिकारीको घुस्याहा लिला भण्डाफोर : पांच लाख घुससहित पक्राउ !
5 पूर्ब मन्त्रीका बहिनी ज्वाई एबम् नेबिसंघ उपाध्यक्ष एमाले प्रबेश